Warbixin: Gobollada Puntland oo maanta si weyn looga xusay munaasabada Ciid al Adxaa. – Radio Daljir
Warbixin: Gobollada Puntland oo maanta si weyn looga xusay munaasabada Ciid al Adxaa.
Garowe, Nov 27 – Waxaa maanta si oo aan kala har lahayn looga ciiday dhammaan deegaannada Puntland, iyadoo munaasabadaha qaarna ay ka qayb galeen madaxda sar sare ee dawladda Puntland.
Gobollada, degmooyinka, tuulooyin iyo waliba dhulka miyiga ah ee Puntland ayaa maanta si siman hal mar oo kaliya looga wada ciiday, iyadoo sawaxanka tagbiirta laga maqlayey dhammaan masaajidda iyo isbartiibooyinka ku yaalla magaalooyinka iyo tuulooyinka kala duwan ee carriga Puntland, waxaana munaasabaduhu u dhaceen sidaan
Magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland, kunaan dad ah ayaa iskugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Garoowe kuwaasi oo gudanayey waajibaadka salaadda ciidda.
Kunaanka qof ee maantay salaaddii ciidul-Adxaaga ku tukagay garoonka kubadda cagta ee magaalada Garoowe, waxaa kala qaybgalay madaxda sar sare ee dawladda Puntland oo ay ka mid yihiin M/weyne Dr. C/raxmaan Max?ed Maxamuud ?Faroole? , afhayeenka baarlamaanka C/rashiid Maxamed Xirsi, golayaasha xukuumadda, wakiillada, garsoor iyo maamulka gobolka Nugaal, midka magaalada Garoowe iyo culimo aw-diin aad u tiro badan, waxaana si weyn loo adkeeyey ammaanka goobta madaxdu salaadda ciidda ku tukanyeen.
Jawi faraxadeed oo aad u weyn ayaa laga dheehan karay dhammaan dadkii iskugu soo baxay fagaarayaasha lagu cibaadaysto ee magaalada Garoowe, waxaana waddooyinka iyo barxadaha magaalada Garoowe maanta buux dhaafshay dadka u soo labbistay gudashada cibaadada iyo carruur aad u labbisan oo gacmaha ku waday waxyaabaha carruurtu ku madadaashaan.
M/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Maxamed Maxmuud ?Faroole?, oo maanta munaasabadda ciidda kala qaybgalay dadka magaalada Garoowe, ayaa khudbad dheer oo dhinayo badan taabanaysay halkaasi ka akhriyey, waxaana m/weynuhu uu si gaar ah awoodda u saaray ammaanka Puntland.
M/weynuhu waxaa uu munaasabadda darteed u hambayeeyey dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland, wuxuuna hambalyada kadib soo jeediyey dadweynuhu in ay gacan ka gaystaan adkaynta ammaanka Puntland, waxaana uu intaas ku daray dawladdu hadda in ay gacanta ku hayso tallaabooyin hor leh oo amniga lagu xoojinayo.
Qaar ka mid ah mas?uuliyiinta kale ee dawladda iyo culimo aw-diinta magaalada Garoowe oo iyana ka hadlay munaasabadda ciidda ayaa sheegay arrimo badan oo ku saabsan is-kaashiga bulshada iyo wada shaqaynta dadweynaha iyo dawladdu in ay keeni karto hormar iyo nabadda buuxda.
Magaalada Boossaaso-na sidaan oo kale ayaa kunaan dadweyne ahi ku tukadeen salaaddii ciidda garoonka kubadda cagta ee magaalada Boossaaso, kuwaasi oo gudanayey cibaadada ay leedahay salaadda Ciidul-Adxaa.
Salaaddaasi ciidda shacabkii halkaasi ku tukaday waxaa kala qaybgalay mas?uuliyiinta dawladda ee ku sugan magaalada Boossaaso oo iskugu jiray golayaasha dawladda iyo maamullada gobolka iyo degmooyinka.
Magaalada Boossaaso oo ah magaalada ugu dadka badan Puntland waxaa waddooyinka iyo goobaha lagu cibaadaysto buux dhaafashay dadweyne rag, dumar iyo carruur iskugu jirta, kuwaasi oo ka qaybgaadanayey damaashaada iyo cibaadada ciidda.
Duqa magaalada Galkacyo C/raxmaan Maxamuud Xaaji Xasan oo in muddo ah ku maqnaa safar dalka dibadiisa ah oo maanta munaasabaddaasi ka hadlay ayaa u mahadcelieyey shacabka magaalada Galkacyo isagoo ku ammaanay sida ay gacan uga gaystaan adkaynta ammaanka magaalada.
Sidoo kale magaalooyinka Qardho, Buuhoodle iyo Badhan ayaa dadweynuhu salaadda ku tukadeen garoomada kubadda cagta ee magaalooyinkaasi, waxaana sidoo kale kala qaybgalay tukashada salaadda mas?uuliyiinta gobolladaasi.
Magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn ayaa iyana si weyn maanta looga ciiday iyada oo ay madaxda iyo dadweynaha gobolka ay isku meel ku tukadeen salaada Ciid al Adxaa.
Xaflad balaaran oo lagu maamuusay munaasabada Ciidul-Adxa ayaa lagu qabtay xarunta idaacada Daljir Buuhoodle, ayna ka soo qayb galeen madaxda gobolka Cayn, degmada Buuhoodle, Issimo, iyo dadweyne kale.
Isku soo wada duuboo dhammaan deegaannada Puntland maanta si siman ayaa looga wada ciiday loogana tukaday salaaddii Ciidul-Adxaaaga, mana jirin wax dhibaato ah oo ka dhashay isku soo baxa dadweynaha iyo xiriirigii badnaa ee maanta ka taagnaa waddooyinka iyo goobaha lagu cibaadaysto ee deegaannada Puntland.